မွန်းကြပ်မှုတွေ နဲ့ဝေးရာကို သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ခရီးတိုလေး ထွက်ခဲ့တဲ့ မိုးဟေကို – Cele Oscar
ရိုးရှင်းတဲ့ အလှတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ဆွဲဆောင် နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချော မိုးဟေကိုကတော့ သူမရဲ့ အလှအပ ကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ မိုးဟေကိုက လက် ရှိမှာလည်း သူမဝါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေရင်း တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးအဖြစ် ဘဝကို အပူအပင်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြတ်သန်းနေထိုင်နေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းသိပြည်သိ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့ မိုးဟေကိုကတော့ လက်ရှိ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး ခြင်းတွေ ရပ်နားထားချိန်မှာ သူမရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ ဖြတ်သန်းမှုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ နဲ့ထိတွေ့နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း မိုးဟေကို က သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ခရီးတိုလေး ထွက်ခဲ့ကြောင်းကို “🎼🎼🎼 လူတွေနဲ့ ဝေးဝေးဝေး တဲ့နယ်မြေ . . . အတူတူ သွား သွား သွားကြမယ်လေ . . . 🎼🎼🎼 အခုလိုကာလကြီး မှာ ခရီးဝေးသွားလို့မရတော့ နီးနီးနားနား မှာပဲ Day trip လေးသွားလိုက်တယ်။ စက်ဘီးလေးနင်းလိုက်၊ သဘာဝ အလှအပကို ခံစားလိုက်၊ လေကောင်း လေသန့်တွေ တဝကြီးရှူရှိုက်လိုက် နဲ့ တကယ့်ကို စိတ်ကြည်နူးစရာ နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲ။ မိုးရဲ့ The First Trip of 2021 ပေါ့။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ချပြလာခဲ့ပါတယ်။
မိုးဟေကို ကတော့ သူမကိုယ်သူမ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီး ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ် ကိုမေ့ထားပြီး စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် ပျော်ရွှင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မိုးဟေကိုရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး အပျော်တွေ ပီတိတွေ ကူးစက်သွား မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြ တဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ရိုးရှငျးတဲ့ အလှတဲ့ ပရိသတျတှေ ကို ဆှဲဆောငျ နိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြော မိုးဟကေိုကတော့ သူမရဲ့ အလှအပ ကွောငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ နာမညျကွီးသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ ။ မိုးဟကေိုက လကျ ရှိမှာလညျး သူမဝါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပျတှကေို လုပျကိုငျနရေငျး တဈကိုယျတညျး အပြိုကွီးအဖွဈ ဘဝကို အပူအပငျကငျးကငျးနဲ့ ဖွတျသနျးနထေိုငျနသေူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ တိုငျးသိပွညျသိ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ဘဝကို ရိုးရှငျးစှာ ဖွတျသနျးတတျတဲ့ မိုးဟကေိုကတော့ လကျရှိ ရုပျရှငျရိုကျကူး ခွငျးတှေ ရပျနားထားခြိနျမှာ သူမရဲ့ နစေ့ဉျဘဝ ဖွတျသနျးမှုတှနေဲ့ ပရိသတျတှေ နဲ့ထိတှနေ့သေူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာလညျး မိုးဟကေို က သူငယျခငျြး တှနေဲ့ စိတျလှတျလကျလှတျ ခရီးတိုလေး ထှကျခဲ့ကွောငျးကို “🎼🎼🎼 လူတှနေဲ့ ဝေးဝေးဝေး တဲ့နယျမွေ . . . အတူတူ သှား သှား သှားကွမယျလေ . . . 🎼🎼🎼 အခုလိုကာလကွီး မှာ ခရီးဝေးသှားလို့မရတော့ နီးနီးနားနား မှာပဲ Day trip လေးသှားလိုကျတယျ။ စကျဘီးလေးနငျးလိုကျ၊ သဘာဝ အလှအပကို ခံစားလိုကျ၊ လကေောငျး လသေနျ့တှေ တဝကွီးရှူရှိုကျလိုကျ နဲ့ တကယျ့ကို စိတျကွညျနူးစရာ နလေ့ေးတဈနပေ့ါပဲ။ မိုးရဲ့ The First Trip of 2021 ပေါ့။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ အမှတျတရလေးတှကေို ခပြွလာခဲ့ပါတယျ။
မိုးဟကေို ကတော့ သူမကိုယျသူမ နိုငျငံကြျောမငျးသမီး ဆိုတဲ့ဂုဏျပုဒျ ကိုမထေ့ားပွီး စိတျလှတျ ကိုယျလှတျ ပြျောရှငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး မိုးဟကေိုရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး အပြျောတှေ ပီတိတှေ ကူးစကျသှား မယျလို့ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွ တဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မအေးသောင်းကို အမျိုးမျိုးတွေ စနောက်ပြီး ဆေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်တို့ ဗီဒီယို –